people Nepal » बेल्जियमलाई हराउँदै फ्रान्स विश्वकप फाइनलमा ! बेल्जियमलाई हराउँदै फ्रान्स विश्वकप फाइनलमा ! – people Nepal
सेन्ट पिटर्सबर्ग (एजेन्सी) – फिफा विश्वकप २०१८ अन्तर्गत पहिलो सेमिफाइनल खेलमा बेल्जियमलाई पराजित गर्दै फ्रान्स फाइनल प्रवेश गरेको छ । मंगलबार भएको फाइनलमा फ्रान्स १-० ले विजयी हुँदै उपाधिनजिक पुगेको हो ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका २३ निर्णयहरु
सिएमसीलाई कानूनविपरित भुक्तानी नदिँदा मेरो सरुवाः खानेपानी सचिव ठाकुर